Faritra Analamanga sy Shanxi Chine : Hampiroborobo ny fampianarana sy ny fampianarana -
AccueilSongandinaFaritra Analamanga sy Shanxi Chine : Hampiroborobo ny fampianarana sy ny fampianarana
Faritra Analamanga sy Shanxi Chine : Hampiroborobo ny fampianarana sy ny fampianarana
Hifanotofan’ireo firenena vahiny ny fiaraha-miasa amin’ny Faritra Analamanga. Vao tsy ela akory mantsy izay no nisian’ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Faritra Analamanga sy Vietnam, tonga indray ny firenena sinoa.
Araka izany, tontosa ny alahady 1 avrily teo, tetsy amin’ny biraon’ny Faritra Analamanga ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa teo aminy sy ny faritra iray any Chine atao hoe Shanxi.
Fantatra tamin’izany àry fa hifanome tanana eo amin’ny tontolon’ny fampianarana, fotodrafitrasa, angovo fizahantany ary fiompiana ny roa tonta.
Raha ny nambaran’ny lehiben’ny Faritra Analamanga, Ndranto Rakotonanahary, faritany sinoa faharoa hiara-hiasa amin’ny Faritra Analamanga i Shanxi. Ny voalohany, raha ny voalaza, niompana misimisy kokoa tany amin’ny fambolena sy fiompiana no niarahan’ny roa tonta niasa. Ny Faritra Shanxi indray, mitovitovy amin’Analamanga mihitsy, satria dia ampovoan-tanàna no misy azy ao Chine.
Tanjona amin’ny fiaraha-miasa kosa indray, ny fanatsarana ny tanàn-dehibe, izay mahakasika indrindra ny fanatsarana ny tanàna. Na izany aza, mitandrina tsara ny tontolo iainana izy ireo amin’izany fanatsarana ny tanàna izany. Izany hoe, tafiditra amin’izany fiaraha-miasa izany ny fanajariana amin’ny ankapobeny ny tanàn-dehibe ao anatin’ny fanajana tanteraka ny tontolo iainana.
Fa anisan’ny voaresaka amin’ny fifanomezan-tanan’ny Faritra roa tonta ihany koa ny mahakasika ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Analamanga. Tafiditra amin’izany ny fifamezivezena eo amin’ny lalana sy ny fifamoivoizana rehetra. Izany hoe, any Shanxi efa misy ireo fitaovam-pitanterana toa ny « tramway », « métro », sns. Noho izany, mijery izay mety hiaraha-miasa amin’ny fanatanterahana ny tetikasa mety eto Analamanga ny eo anivon’ny Faritra Analamanga.
Voalaza ihany koa fa anisan’ny goavana eo amin’ny fifanaovan-tsonia ny fitondran’ny Faritra Shanxi mpianatra avy eto amintsika ho any aminy. Mbola tsy voafaritra kosa ny isan’ny mpianatra ho any Chine. Voafaritra mazava fa mpianatra tsy maintsy mahay teny sinoa no afaka hoentina mivahiny any amin’izy ireo.
Ankoatra izay, dia tafiditra amin’ny politika sinoa ny fivelarana amina firenena hafa. Izany hoe, tanjon’izy ireo ny mizara ny traikefa ananany amin’ny firenena izay vonona hiara-hiasa aminy.
Ambalavao : Nojerena manokana ny tantsaha
Asa fa tsy kabary. Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ataon’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Taorian’ny fanomezana fotodrafitrasa maro tao amin’ny Faritra Matsiatra Ambony, ny faran’ny herinandro teo dia nitohy tao amin’ny distrikan’Ambalavao, tao Vohitsambo, tao amin’ny ...Tohiny
TAFA-PIFIDIANANA : Fanirisoa Ernaivo 24 – José Andrianoelison 15 – Bruno Rabarihoela 32
MID : Mpizaika frantsay sy gasy 450 hivory momba ny fitsinjaram-pahefana